November 8, 2017 - Apannpyay
မြန်​မာဘီယာ အား​ပေးရာမှ ကျပ်​သိန်း ၂၀၀ မဲ​ပေါက်တဲ့ ကံထူးရှင်
November 8, 2017 November 8, 2017 Apann Pyay
မြန်​မာဘီယာ အား​ပေးရာမှ ကျပ်​သိန်း ၂၀၀ မဲ​ပေါက် သိန်း ၂၀၀ ဆုရှင်​ ​ညောင်​​ရွှေမြို့ တိ​လောရွာမှ... Read More
ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ဆိုတာ…။
November 8, 2017 Apann Pyay
ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို... Read More
အလွန်အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်းမို့ ရှဲယူထားလိုက်ပါ။
အလွန်အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်း ဂုဏ်တော် 9ပါးကို ပုတီး (10)ပတ်ရအောင်ခွဲ၍ စိပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်နေ့သားသမီးမဆို... Read More
ယောက်ျားလေးများသာ ကြည့်ရန် လက်ဆောင်ပါ။
“တကယ်​လို့များ” တကယ်လို့ များ မင်းတို့ရင်ထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်မချစ်ရင် မျှော်လင့်ချက်တွေ သိပ်မပေးပါနဲ့——-! တကယ်လို့ များ... Read More
ညိုချောလေးတွေကနေ ငွေမကုန်ပဲ ဖြူဖြူ ချောချောလေးတွေ ဖြစ်သွားစေဖို့ အိမ်တွင်းဖြစ် အသားဖြူနည်းများ
ညိုချောလေးတွေကနေ ငွေမကုန်ပဲ ဖြူဖြူ ချောချောလေးတွေ ဖြစ်သွားစေဖို့ အိမ်တွင်းဖြစ် အသားဖြူနည်းများ လိမ္မော်ခွံနဲ့အသားဖြူနည်း လိမ္မော်သီးအခွံကို... Read More
သင်​ဟာ ဘာနက္ခတ်​လဲ? ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ? ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် တွက်​ကြည့်လိုက်​ကြရ​အောင်​နော်..။
သင်​ ဘာနက္ခတ်​လဲဆိုတာ တွက်​ကြည့်​လိုက်​ကြရ​အောင်​ မိမိတို့၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို (၃) နဲ့စား ၁ ကြွင်းလျှင် နတ်နက္ခတ်... Read More
ပဋ္ဌာန်း ရွတ်လို့ ကံဆိုးသွားရတယ်​ဆိုလို့ ပြောတာတွေ ကြားဖူးတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်နော်
ပဋ္ဌာန်း ရွတ်လို့ ကံဆိုးသွားရတယ်​ဆိုလို့ ပြောတာတွေ ကြားဖူးတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်နော် လူရယ်​လို့ဖြစ်​တည်​လာပြီးလူ​လောကထဲမှာကျင်​လည်​ကြရတဲ့အခါ... Read More
ကျောက်ကပ် ဝေဒနာရှင်တို့အတွက် ဆေးကောင်းတလက်ဖြစ်လို့ ရှဲပေးနော်…။
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်တို့အတွက် ဆေးကောင်းတလက်….​ ဝေဒနာရှင်​ကိုယ်​တိုင်​ လက်​​တွေ့​ပျောက်​ကင်းထား​သော​ကြောင့်​ သင့်​ ရှဲတစ်​ချက်​ဖြင့်​ ​ဒါနပြုကြရ​အောင်​လားရှင်​ လက်တွေ့ ရောဂါပျောက်ကင်းသူများ ရှိနေပါပြီ... Read More
သင့်… အိမ် ခြံ မြေ ၀င်း အတွင်း မြွေ တွေ့လျှင် ဒါတွေကို လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
အိမ်ခြံမြေအတွင်း မြွေတွေ့လျှင် လုပ်ရမည့်နည်း သင့်အိမ်ဝင်းထဲမှာမြွေတွေအဝင်အထွက်ရှိနေလို့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်မြွေတွေပြေးစေမည့်သဘာဝနည်းလမ်းလေးပါ ။ ပါဝင်ပစ္စည်း ဆေးရွက်ကြီး(စွန့်ပစ်ထားသော) ဆေးရိုးများ ဇီးဖြူသီး ဇီးဖြူရွက်... Read More
ယောက်ျားလေးတွေတိုင်း လိုချင်​တာ ဒီလိုမိန်းခလေးမျိုးဆိုရင် ဘယ်သူငြင်းမလဲ..?
​ယောက်ျား​တွေတိုင်း လိုချင်​တာ ဒီလိုမိန်းလေးမျိုးဆိုရင် ဘယ်သူငြင်းမလဲ..? (၁) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သိပ်ချောသိပ်လှစရာမလိုဘူး။ လူကြားသူကြားထဲခေါ်ထွက်လို့ရပြီး အိမ်အပြန်ခေါ်ပြန်လာလို့ရရင် ရပြီ။... Read More